Ku saabsan sharciga dugsiga sare - Migrationsverket
/ Ku saabsan sharciga dugsiga sare
Su’aalo iyo jawaabo khuseeya ruqsadda deggenaanshada oo dhigashada waxbarashada dugsiga sare
Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier – somaliska
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo sharciga dugsiga sare – guud ahaan
Ilaa intee buu sharciga cusub ansaxsanaan?
Sharciga cusub waxaa la bilaabi in lagu dhaqmo 1 juun 2017. Sharcigaan wuxuu ansaxsanaan ilaa 19 juulay 2019 sida sharciga (2016:752) ku saabsan xadidaada lagu suubiyay fursadaha lagu helo ruqsadda deggenaanshada oo Iswiidhan.
20 juulay 2019 waxaa hirgali sharci cusub oo isku xeerar ku qoranyahiin, oo khuseeyndoono dadka hestay ruqsadda deggenaanshada dhigashada waxbarashada dugsiga sare. Warbixin sharcigaas ku saabsan wakhti waa la soo bandhigidoona.
Maxaa aniga la iga dooni sidaa ku helikaro ruqsadda deggenaanshada dhigashada waxbarashada dugsiga sare?
Dhowr wax oo kala duwan baa sabab u noqon karo haddii aad heli kartid ruqsadda deggenaanshada dhigashada waxbarashada dugsiga sare. Xeerarka waa kala duwan yahiin haddii adiga aad tahay magangelyodoon iyo adiga oo dooni in wakhti dheerad loogu daro ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka. Xeerarka weey kala duwanyahiin haddii adiga aad tahay canug kaligiis wadanka imaad oo magangelydoon ah, haddii adiga aad dhigatid barnaamishyada qaranka midkood ama barnaamishka oo bilaabida waxbarashada iyo xaaladaha qaarkood xilligii codsigaadi koowad oo magangelyodoonida anaga na soo gaaray.
Ilaa intee buu wakhtigeeda yahay ruqsadda deggenaanshada haddii aniga dhigto waxbarashada dugsiga sare?
Ilaa inta ruqsadda deggenaanshada ahaandoonto waxey ku xirantahay ilaa intey soconeyso waxbarashada aad dhiganeysid iyo haddii adiga aad dhigatid barnaamish qaran ama barnaamishka oo bilaabida waxbarashada. Qofka wuxuu helikara ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan afar sano ama mid ansaxsan 13 bilood. Waxaa la helikara ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan 6 bilood markaa waxbarashada dhammeeysid kadib.
Sharciga dugsiga sare miyuu khuseeya kaliya carruurta kaligood wadanka imaadan oo magangelydoonka ah?
Maya, xitaa dhallinyarada oo waalidkooda la imaaden Iswiidhan weey haystaan fursadaan oo iney soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada dhigashada waxbarashada dugsiga sare. Qofka wuu ahaan kara qof buuxiyay 18 laakin wali gaarin 25 sano.
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo codsashada koowad oo magangelyada
Aniga waxaa ahay qof weeyn ama canug qoyskiisa la nool iyo waxaa dhigtaa waxbarashada oo barnaamishka qaranka oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii Hay’adda socdaalka ey qiimeyso in adiga xaq u leedahay in lagu siiyo ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo baahi difaac ahaan, sababo qaas ama suurtagaleyn in lagu tarxiilo adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada oo wakhti dheer ansaxsanaaneyso oo aadan heli laheen oo:
adiga waxaa jirtaa 17 ilaa 24 sano
adiga waxbarasho dugsiga sare dhammeyn ama wadankale ka soo dhigan oo Iswiidhan laguugu qiimeeyay
ilaa inta waxbarashada la dhigan ka dheertahay wakhtiga ilaa intuu ansaxsanaan ruqsadda deggenaanshada adiga heli laheed.
Adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan ilaa 6 bilood kadib markaa waxbarashada dhameysid.
Aniga waxaa ahay qof weeyn ama canug qoyskiisa la nool iyo waxaa dhigtaa barnaamishka oo bilaabida waxbarashada oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii Hay’adda socdaalka ey qiimeyso in adiga xaq u leedahay in lagu siiyo ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo baahi difaac ahaan, sababo qaas ama suurtagaleyn in lagu tarxiilo adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada arrimahaas dartood. Adiga ma heli kartid
ruqsadda deggenaanshada oo ansaxsanaaneyso wakhti ka dheer ilaa inta waxbarashada barnaamiska bilaabida oo waxbarashada dugsiga sare oo marka koowaad aad soo codaneysid magangelyo.
Aniga waxaa ahay canug kaligiis wadanka imaaday iyo waxaa dhigtaa waxbarashada oo barnaamishka qaranka oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii Hay’adda socdaalka ey qiimeyso in adiga xaq u leedahay in lagu siiyo ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo baahi difaac ahaan, sababo qaas ahaan, suurtagaleyn in lagu tarxiilo ama adiga laguu siin ruqsadda deggenaanshada maadaama wadankaada uusan laheen nidaam soo dhaweeynta, adiga waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare oo wakhti dheer ansaxsan.
Ruqsadda deggenaanshada waxeey ansaxsanaan 6 bilood kadib markey xilliga waxbarashada kuu dhamaato.
Adiga inaadan waxbarasho dugsiga sare aadan dhammeyn ama wadankale ka soo dhigan oo Iswiidhan laguugu qiimeeyn.
Aniga waxaa ahay canug kaligiis wadanka imaaday iyo waxaa dhigtaa barnaamishka oo bilaabida waxbarashada oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii adiga laguu oggolaado ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka maadama nidaam qaabilad laheen wadankaada, adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada oo 13 bilood haddii adiga horey usoo dhigan waxbarashada dugsiga sare ama mid u dhigno oo wadankale ku soo dhigatay oo Iswiidhan laguugu qiimeeyay.
Aniga waxaa ahay canug kaligiis wadanka imaaday iyo soo codsaday magangelyo ka hore 24 nofembar 2015. Aniga waxaa dhigtaa dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii adiga laguu oggolaan ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka maadaama eysan suurtagaleyn in laguu tarxiilo uusan ka jirin wadankaada nidaam soo dhaweeyn, adiga waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada oo ansaxsanaaneyso ilaa 4 sano waa haddii adiga dhigatid barnaamishka oo bilaabida waxbarashada ama barnaamishka qaranka oo dugsiga sare.
Aniga waxaa ahay canug kaligiis wadanka imaaday iyo waxaa dhigtaa dugsiga sare. Aniga waxaa la iga gaaray go’aan tarxiilid ama wadan ka saarid oo dib loo dhigay – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii codsigaadii koowad na soo gaaray ugu dambeyntii 24 nofembar 2015 adiga waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada oo 4 sano haddii adiga dhigatid barnaamishka oo bilaabida waxbarashada ama barnaamishka qaranka. Adiga waa inaa Iswiidhan joogtid markaa soo codsaneysid ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare.
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo codsiga dheereynta ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka
Aniga waxaa soo codsan in la ii dheereyo ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo aniga ku helay baahi difaac u qabo ama suurtagaleyn in la tarxiilo. Aniga waxaa dhigtaa barnaamishka qaranka oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Arrinta waa sidaan markey noqoto dadka weeyn, carruurta kaligood wadanka imaadeen iyo carruurta qoyskooda la socdo oo sababtii ruqsaddii hore lagu siiyay wali sideeda tahay:
Haddii sababtii ruqsaddii hore wali sideeda tahay adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaansho oo wakhtigeeda dheeryahay oo adiga aadan heli laheen haddii aad jirtid 17 ilaa 24 sano iyo aadan dhameysan waxbarashada dugsiga sare ama mid u dhigmo oo Iswiidhan laguugu qiimeyn. Adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan ilaa 6 bilood kadib markaa waxbarashada dhameysid. Waxbarashada ilaa wakhtiga ey soconeyso waa iney ka dheertahay ruqsadda deggenaanshada adiga haddii aad heli laheed.
Arrinta waa sidaan markey noqoto dadka weeyn, carruurta kaligood wadanka imaadeen iyo carruurta qoyskooda la socdo oo sababtii ruqsaddii hore lagu siiyay eysan sideedi eheen:
Haddii sababtii ruqsaddii hore eysan sideedi eheen adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaansho oo dhigashada dugsiga sare haddii aad jirtid 18 ilaa 24 sano iyo aadan dhameysan waxbarashada dugsiga sare ama mid u dhigmo oo Iswiidhan laguugu qiimeyn. Adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo mid ansaxsan ilaa 6 bilood kadib markaa waxbarashada dhameysid. Carruurta wadaka kaligood imaaday xuduudka da’da waa 17 sano.
Aniga waxaa soo codsan in la ii dheereyo ruqsadda deggenaanshada. Aniga waxaa dhigtaa barnaamishka oo bilaabida waxbarashada oo dugsiga sare – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii sababtii ruqsaddii hore wali sideeda tahay adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaansho oo wakhtigeeda dheeryahay oo isku sababihii hore.
Haddii sababtii ruqsaddii hore eysan sideedi eheen adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaansho oo dhigashada dugsiga sare muddo 13 bilood haddii adiga jirtid 18 ilaa 24 sano iyo aadan dhameysan waxbarashada dugsiga sare ama mid u dhigmo oo Iswiidhan laguugu qiimeyn. Carruurta wadaka kaligood imaaday xuduudka da’da waa 17 sano.
Aniga waxaa ahay canug kaligiis wadanka imaaday iyo waxaa gaaray 18 sano xilliga la tijaabin codsiga dheereynta ruqsadda – maxaa aniga i khuseeyo?
Haddii adiga aad haysatay ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka oo baahi difaacid iyo buuxisay 18 sano adiga waxaa laguu tijaabin sidii inaa tahay qof weeyn camal oo soo codsanaayo in ruqsadda loo dheereyo. Fiiri qeybta hore oo su’aalo iyo jawaabo.
Haddii adiga haysatay ruqsadda deggenaanshada sababtu tahay in lagu tarxiilikarin maadaama wadankaada uusan la eheen nidaam soo dhaweyn iyo adiga aadan helikarin ruqsadd noocaas camal mar labad, waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare haddii:
adiga jirtid 18 ilaa 24 sano
adiga waxbarasho dugsiga sare dhammeyn ama wadankale ka soo dhigan oo Iswiidhan laguugu qiimeeyay.
Haddii adiga aad dhigatid barnaamish qaran oo dugsiga sare waxaad adiga heli kartaa ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan ilaa 6 bilood kadib markaa waxbarashada dhameysid. Haddii adiga dhigatid barnaamishka waxbarasho bilaabida oo dugsiga sare waxaad adiga heli kartaa ruqsadda deggenaanshada mid ansaxsan 13 bilood.
Haddii adiga aad haysatay ruqsadda deggenaanshada oo lagu tarxiilikarin maadaama wadankaadi hooyo uusan laheen nidaam soo dhaweeyn iyo adig aadan helikarin ruqsad cusub oo isla noocas iyo adiga codsigaadii koowaad oo magangelyada la diwaangaliyay 24 nofembar 2015 ama ka hore, adiga waxaad heli kartaa ruqsadda deggenaanshada oo dhigashada waxbarasho oo barnaamishka oo waxbarasho bilaabida ama barnaamishka qaranka oo dugsiga sare oo ansaxsanaanaayo muddo afar sano.
Adiga waa inaa Iswiidhan joogtid markaa soo codsaneysid ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare.
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo codsiga
Aniga waxaa soo codsaday magangelyo iyo waxaa dhigtaa dugsiga sare. Sidee suubin markaa dooni inaa codsigeyga ku soo kordhiyo caddeynta inaa waxbarasho dugsi sare dhigan?
Haddii adiga aad martay kulanka baaritaanka magangelyada Hay’adda socdaalka waxeey kaa soo dalban doontaa in adiga usoo dirtid warqada oo qorshaha waxbarashada adiga qaaska kuu ah haddii adiga dhigatid waxbarashada oo dugsiga sare.
Haddii adiga wali aadan marin baaritaanka magangelyada adiga waxaad horey usoo qaadan warqada oo qorshaha waxbarashada adiga qaaska kuu ah xilliga aad kulanka baaritaanka mareysid. Warqada oo qorshaha waxbarashada adiga qaaska kuu ah waxaa ku sii iskuulka.
Aniga waxaa haystaa ruqsadda deggenaanshada oo sababta baahi difaacid iyo dhigashada waxbarashada dugsiga sare. Sidee baa aniga suubin?
Adiga waxaad soo codsan ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare markaa codsaneysid in laguu dheereyo ruqsadda. Adiga ma heleysid mid cusub oo ruqsadda deggenaanshada ayadoo tii hore wakhtigeeda dhammaan.
Aniga waxaa haystaa go’aanka tarxiilida iyo wadan ka saarida laakiin dib loo dhigay. Aniga dugsiga sare baa dhigtaa - sidee baa aniga suubin?
Haddii codsigaadi magangelyada aan diwaangalinay 24 nofembar 2015 ama ka hore iyo adiga lagaa gaaray go’aan tarxiilid ama wadan ka saarid laakiin dib loo dhigay adiga xeerarka weey ku khuseeyaan. Adiga markaas waxaad u baahantahay inaa tagtid xafiiska codsashada ama qaabilaada iyo codsigaada diwaangalisid. Adiga arrintaas waxaa suubinkartaa laga bilaabo 1 juun 2017.
Aniga waxaa i soo gaaray go’aanka inaa bilaabikaro dugsiga sare. Ma soo codsankara ruqsadda deggenaanshada oo dhigashada dugsiga sare?
Maya, adiga waa koow bilaawdid waxbarashada dugsiga sare oo markaas kadib soo codsatid ruqsadda deggenaanshada.
Caddeymahee baa aniga u baahnahay inaa keeno sidaa idiin tusi karo inaa aniga dhigto dugsiga sare?
Haddii adiga aad dhigatid dugsiga sare/dugsiga sare oo ardeyda maskaxdooda gaabiso waxaad kaliya u baahantahay inaa noo keentid warqada qorshaha waxbarashada adiga qaaska kuu ah. Haddii adiga dhigatid dugsiyada bulshada ama iskuulka dadka weeyn waxaad kuuwaas ka keeni warqado u dhigmo. Warqadaas adiga waxaa ku siin iskuulka aad dhigatid.
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo waxbarashada
Kuwee ah waxbarasho dugsi sare?
Waxbarasho dugsi sare waxaa laga wadaa waxbarashada sida barnaamishka waxbarasho bilaabida ama barnaamishka qaranka midkood oo lagu dhigo dugsiga sare ama dugsiga sare oo ardeyda maskaxdooda gaabiso. Waxbarasho wakhti buuxo oo heer dugsi sare oo dugsiga bulshada iyo iskuulka dadka weeyn waxaa xitaa lagu xisaabiyaa iney yahiin waxbarashada dugsiga sare.
Qasab miyaa inaa aniga dhigto waxbarashada wakhti buuxo?
Haa, xaaladaha inta ugu badan waa qasab inaa adiga dhigatid wakhti buuxo dugsiga sare. Waxbarasho wakhti kala bar la dhigaan waxeey kaliya suurtagali in ruqsadda deggenaanshada lagu helo haddii qofka xanuunsanaayo, curyaanimo ama baahi qabo inuu waxbarasho wadankale ka soo dhigtay inuu dhameystiro.
Ma u baahnahay aniga inaa natiijada waxbarashada idin tuso sidaa usii haysankaro ruqsadda deggenaanshada?
Haa, haddii adiga lagoo oggolaado ruqsad ansaxsanaaneyso wakhti ka badan 13 bilood, adiga waa in sankasto noo soo gudbisaa warbixin inaa ka qeyb-qaadatay waxbarashada, oo waxaa tusaale ahaan noo keeni warqada warbixinta iskuul joogtada ama shahaadooyinka aad qaadatay. Haddii aadan sidaa suubinkarin Hay’adda socdaalka dib bey u tijaabin go’aanka ruqsadda deggenaanshada aad haysatid ama weey kaa ceshankartaa.
Haddii aniga waxbarashada aan ku dhameyn waayo wakhtiga la ii qorsheeyay, ma suurtagal in ruqsadda deggenaanshada wakhtigeeda la ii dheereyo sidaa waxbarashadeyda u dhameysankaro?
Haa, xaaladaha qaarkood adiga waa laguu dheereynkara wakhtiga ruqsadda deggenaanshada sidaa waxbarashadaada u dhameysatid. Haddii adiga aad dhigatid barnaamishka qaranka waa inaa caddeynkartid inaa si firfircooni uga qeyb-qaadatay waxbarashada.
Aniga ma joogi kara Iswiidhan markaa dhameyo waxbarashada dugsiga sare?
Markaa dhameysid waxbarashada dugsiga sare adiga waxaad soo codsan in laguu dheereyo ruqsadda. Haddii adiga aad dhameysid waxbarashada waxaad soo codsankartaa ruqsadda deggenaanshada oo lix bilood ansaxsanaaneyso, oo taasna adiga waxeey kuu noqon fursad aad shaqo Iswiidhan uga dhex heshid. Haddii adiga aad isku filantahay oo is masruufikartid oo shaqo ama shirkad aad iska leedahay adiga waxaa suurtagal kuu noqonkaro inaa heshid ruqsadda deggenaanshada oo joogtada.
Su’aalo iyo jawaabo khuseeyo qoyska
Waalidkeyga ma igu imankran Iswiidhan markaa aniga helo ruqsadda deggenaanshada oo dugsiga sare?
Adiga waxaad haystaa fursad aad qoyskaada ku wada midoowdiin haddii adiga laguu aqoonsada xeerka qoxootinimo, ama dadka difaacida nooca kale baahida u qabo iyo adiga soo codsatay magangelyo ugu dambeyntii 24 nofembar 2015. Haddii qoyskaada aad isla wada midooweysiin waxaa qasab ah in adiga aad ka yartahay 18 sano.
Ma heli kara xaaskeyga, ninkeyga ruqsadda deggenaanshada oo aniga ma soo sheegan karan haddii aniga helo ruqsadda deggenaanshada oo dhigashada dugsiga sare?
Siduu xaaskaada/ninkaada/qofka kuu diwaangalisan inaa nolosha isla wadaagtiin waxaa qasab ah:
in adiga laguu aqoonsado qoxootinimo, ama dadka difaacida nooca kale baahida u qabo iyo adiga soo codsatay magangelyo ugu dambeyntii 24 nofembar 2015
in labadiina aad ka weeyntahiin 21 sano (waa haddii carruur aadan isku dhallin)
in idinka aad wada nooleedeen intaadan adiga Iswiidhan usoo qaxin.
Ku saabsan sharciga dugsiga sare